NextMapping | महामारीमा हाम्रो काम लोअरको रक्तचाप हो
के २०२० ले तपाईंलाई कतै लात दियो के तपाईंलाई थाहा छ? यो म / म महामारीको समयमा हाम्रो साझा मानवता मा फोकस गर्न सक्छन् कसरी मा लिन्छ।
मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन तर २०२० प्यान्टको सीटमा ठूलो किक भयो।
यस्तो देखिन्छ कि महामारीको तनावले हामी धेरैलाई थकित पारिदिएको छ र हामीलाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुवै रूपमा बढी तनाव गराएको छ।
यो आशामा साझा गर्दैछु कि तपाईले कसरी सम्बन्धित हुन सक्नुहुन्छ २०२० मेरो लागि तल कसरी आएको छ।
जनवरीमा हामी जीवन र मृत्युको भय family्कर पारिवारिक अवस्थाको साथमा परेका थियौं - शुभ समाचार यो हो कि जीवनले विजय पायो र हामी कृतज्ञ छौं। वास्तवमा यो घटनाले हाम्रो परिवारलाई मानसिकतामा ल an्गर बनायो कि यदि कुनै अवस्था जीवन वा मृत्यु होइन भने यो तनावपूर्ण छैन।
फेब्रुअरीमा मेरो श्रीमान्को लागि स्वास्थ्य आपतकालको कारण महामारीको लागी शल्यक्रिया भयो।
मार्चमा मेरो श्रीमान्‌ले कोभिड १ shut शटडाउन सुरु गरेपछि शल्यक्रिया जटिलताहरू भएको थियो।
हाम्रो परामर्श व्यवसाय सम्बन्धित सबै यात्रा मार्चमा रोकियो र हामीले चाँडै पिभोट गर्नुपर्दा हाम्रा ग्राहकहरु लाई सेवा पुर्‍याउन प्रतिज्ञा गरिएको डिलिभरीमा कुनै बाधा बिना
अप्रिलमा हामीले परिवारले शहरबाट ग्रामीण समुदायमा टाढा एउटा ठूलो कदम चाल्ने निर्णय ग .्यौं।
मेमा हामीले चार घर जग्गा कारोबारहरू व्यवस्थित गरेका छौं।
जुनमा मेरी छोरी र उनको परिवार आफ्नो नयाँ घरमा सरे।
जुलाईमा मेरो श्रीमान्‌ र म हाम्रो नयाँ घरमा स .्यौं।
सेप्टेम्बरमा हामीले हाम्रो नयाँ घरको बिस्तारै मर्मतसम्भार गर्न थाल्यौं। हामी यसको बीचमा छौं, यसको तनावपूर्ण र म यो पहिलो विश्व समस्या महसुस गर्दछु।
अक्टुबरमा मैले मेरो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी प्राप्त गरें जुन गम्भीर छैन तर ध्यान चाहिन्छ। यसले मेरो सम्पूर्ण वयस्क जीवनको लागि बलियो स्वास्थ्य रहेकोमा म कृतज्ञ छु र म अझै स्वस्थ छु र मेरो स्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
नोभेम्बरमा जाँदा हामी सबै महामारी र राजनीतिक अनिश्चितताको दोस्रो छालको अति सतर्कतामा छौं।
त्यसैले मँ यो तपाईंसँग साझेदारी गर्दछ किनकि मेरा मित्रहरू छन् जो सबै मार्फत जाँदैछन् र २०२० मा प्रमुख सामानहरू मार्फत गएका छन्।
म मानिसहरूलाई चिन्छु जसले आगोको कारण आफ्नो घरहरू हराए। म मानिसहरूलाई चिन्छु जसले आफ्नो काम हराएका छन्। म मानिसहरूलाई चिन्छु जसले आफ्ना प्रियजनहरू गुमाएका छन् र म ती मानिसहरूलाई चिन्छु जो २०२० ले ल्याएका सघन तनावहरूसँग मानसिक रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन्।
यहाँ के मैले आफैंलाई सम्झाउनु पर्छ र म तपाईलाई पाठकलाई अनुरोध गर्दछु यी पागल समयहरूमा:
# १ - २०२० मा हाम्रो मुख्य काम र म अबदेखि भन्छु हिम्मत के छ हामी कुराकानी गर्ने को रक्तचाप कम गर्न को लागी जे गर्न सक्छौं।
हालसालै हामी काम र स्वास्थ्य भेट्न शहरमा थियौं। हामी हाम्रो नातीका लागि प्यारो पोशाक हेर्न डिज्नी स्टोर गयौं। हामी दुवैले मास्क लगाएका थियौं। ढोकामा काम गर्ने व्यक्तिले मेरो मास्कमा हेरी र मलाई भने कि यो 'कोड' होइन। उनले मलाई उनीहरु मध्ये एक लिन भने - मैले गरे। हामी जताततै मास्क लगाउँदछौं र हामी जताततै हाते सेनिटाइजर प्रयोग गर्दछौं। एक साधारण यात्रा डिज्नी store तनावपूर्ण भयो। र त्यसपछि जब उनले भनिन्, 'एक जादुई दिन छ' म कसम खान्छु यदि म आफैंलाई काबूमा राख्न सक्दिन भने मैले केहि व्यंग्यपूर्ण कुरा भन्न सक्छु।
म यो कथा एक रिटेल आउटलेटको उदाहरणको रूपमा साझा गर्दछ जसले आफ्नो स्टोरमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको रक्तचाप बढायो। त्यहाँ एक तरीका छ मानिसहरूलाई एक तरीकाले मानिससँग कुराकानी गरेर सुरक्षित रहन। मैले डिज्नी ब्रान्डबाट पूर्ण विच्छेदन महसुस गरेको छु र त्यो कुराकानीको बारेमा मैले महसुस गरें।
# २ - माया एन्जलूले भने, "मानिसहरूले तपाईंले भनेको कुरा याद हुँदैन तर तिनीहरूले उनीहरूले महसुस गरेको महसुस गर्नेछन्। '
यो भन्दा पहिले पहिले कहिल्यै सत्य भएको थिएन। यदि हामी व्यक्तिमा बढी तनाव थोपिरहेका छौं भने हामी ब्रान्डको अनुभवलाई दागिरहेका छौं। उही भ्याकूवर यात्रामा मैले किनमेल गरें क्लब मोनाको। मैले मेरो मास्कमा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गरें र कामदारहरूले भने, "स्वागत!" र जब म केवल ब्राउज गर्दै थिएँ मैले के गरिरहेको थिएँ भनेर सोध्नु थियो र सामान्यतया यो शान्त र स्वागतपूर्ण महसुस भयो।
दुई अनुभव बीचको भिन्नता मसँग रहे। 'नियमहरू' संग लडाई हुनुको बिरूद्धमा फरक छ उनीहरूको ख्याल गर्ने मानिससँग हेरचाह गर्नु।
# - - सबैजना र म सबैलाई दोहोर्याउँदछौं अहिले तनावमा छन्। यदि हामीले यो याद गर्न सक्छौं भने हामी बुझ्ने प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हाम्रो क्षमतालाई बढाउन सक्छौं।
मैले गर्ने काममा सीईओ, नेताहरू र कार्यकर्ताहरूसँग काम गर्ने समावेश छ र मैले पाइरहेको छु कि उनीहरूमा जति स्पष्टता र शान्ति ल्याउन सक्छु त्यति नै उनीहरूले महसुस गर्न सक्दछन्। चाहे यो एक मुख्य सन्देशको माध्यमबाट हो वा यसको भर्चुअल कोचिंगका माध्यमबाट मानिसहरूले महसुस गर्न चाहन्छन् जस्तो उनीहरूले देखेको र बुझिएको छ।
# - - मान्छेको रक्तचाप कम गर्न मद्दतको उत्तम तरिका भनेको हामी सबैले साझा गरेको मानवतामा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। तपाईका समस्याहरू मेरो समस्या हुनसक्दैनन् यदि यदि म हाम्रो साझा मानवीयताको लागि अनुकम्पा राख्छु भने म राम्रोसँग सम्बन्धित र कुराकानी गर्न सक्दछु। अर्को शब्दहरुमा यदि म कसरी यो ध्यान दिन सक्छु कि हामी कसरी 'सबै सँगै मिलेर' छौं र हामी आफैंमा आफ्नै चुनौतिहरु छन् भने हामी गहिरो समझको लागि एक पुल निर्माण गर्न सक्दछौं।
त्यसोभए तपाईको लागि छुट्टिएको प्रश्न:
के तपाईं संचार गर्दै हुनुहुन्छ र कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ जुन शान्त छ र मानिसहरूलाई सहयोग गर्दै छ वा तपाईं उनीहरूको रक्तचाप बढाइरहनुभएको छ?
मलाई थाहा छ मेरो लागि म केन्द्रित छु पछिल्लोलाई होइन।